Dhageysi Khudbadaha Musharixiinta KG oo maanta bilaabanaysa. – Hornafrik Media Network
Dhageysi Khudbadaha Musharixiinta KG oo maanta bilaabanaysa.
By Liibaan Nuur	 On Dec 16, 2018
Baydhabo-(Hornafrik)-Maanta ayaa la filayaa in ladhageysto Khudbadaha ay jeedin doonaanqaar ka mid ah Musharixiin u tartamaya Xilka Madaxtinimada ee Maamulka KoofurGalbeed.
Ku dhawaad sedex musharax ayaa qorshuhu yahay in maanta ay bilaabaan hadal jeedintooda.
Musharixiinta maanta khudbadaha jeedinayo ayaa waxaa ka mid ah:-
Xuseen Cusmaan Xuseen.
Ibraahim Macalin Nuurow.
Arintan ayaa ku soo beegmaysa, kadib markii maalmo ka hor Magaalada Baydhabo lagu xiray Musharax Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur,iyadoona ay xusid mudan tahay in gudiga doorashada Koofur Galbeed ay horey u diiwaan geliyaan musharaxa.
Xildhibaan Nuur Ibraahim Cusmaan oo wareysi siiyay idaacadda Kulmiye ayaa xaqiijiyay in maanta khudbadahooda ay jeedin doonaan qaar ka mid ah musharixiinta madaxweynaha Maamulka koofur Galbeed Soomaaliya.
Amaanka wadooyinka soo gala goobta ay ka dhacayso doorashada ayaa aad loo adkeeyay, iyadoona wadooyinka lagu arkayo ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan Booliska Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Koofur Galbeed.
Doorashada Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa la filayaa in ay dhacdo 19 bishan.
Xiisad siyaasadeed ayaa ka aloosan Magaalada Baydhabo ee Gobalka Bay, iyadoona dhowr jeer ay odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed ku baaqeen in dib loo dhigo doorashada Maamulka Koofur Galbeed.
Shalaya ayay aheyd markii Gudoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamanaka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdi Raxmaan uu gudiga doorashada Maamulka Koofur Galbeed ka dalbaday in ay dib u dhigaan Doorashada Maamulkaasi
Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay Xariga loo geystay Roobow.
Koofur Galbeed oo sheegtay inaysan Lug ku laheen Xariga Roobow.